MP4 Edit, MKV, FLV, MOV iyo qaabab kale la VirtualDub
VirtualDub waa video qalab qabashada / processing free ah in dhufto ee Windows (oo ay ku jiraan 2000 / XP / Vista / 7). Hawlaha tafatirka ayaa laga yaabaa in aan awood badan sida tifaftirayaal guud-Ujeeddada sida Adobe Ciyaar iyo Sony Vegas, laakiin waxa uu kasoo muuqday hawlgallada toosan si dhakhso ah badan video. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin waxtar leh si ay kaaga caawiyaan in aad hesho ugu badan uga VirtualDub.
Edit qaabab kasta
VirtualDub lagu bedelan karo
Sida aad la socotaanba, VirtualDub, sida taagan oo keliya, ma xamili karaan MP4, MKV, FLV, MOV ama wax files kale AVI ka sokow. Laakiin waxaa weli tahay siyaabaha loo shuban arrintan software video tafatirka. Hadda isku day inaad soo socda saddex hab oo kala duwan si ay u isticmaalaan qaabab kale file sida aqbasho in VirtualDub ahayn AVI.
Habka 1: Abuur ah AVISynth script
Habka 2: Download plugins u qaabab kala duwan
Habka 3: Beddelaan MP4, MKV, FLV, MOV iyo qaabab kale oo ay ku AVI
Habka 1: Samee qoraal ah AVISynth
Haddii aad ogtahay sida sida loo isticmaalo AVISynth, aad si fudud u furi karaan noocyo kala duwan oo ah qaabab video in VirtualDub. Asal ahaan, ay u shaqayso sida tan: Marka hore, waxaad u sameeyaan dukumenti fudud qoraalka la amarrada gaarka ah, loo yaqaanno script ah. Amarrada waxay tixraacyo mid ama ka badan videos iyo sida diirada aad rabto in ay sii wadaan iyaga on. Ka dib markii in aad u VirtualDub iyo furi file script ah. Markaas VirtualDub ma ogaadaan in AVISynth waxaa ka shaqeeya ee asalka ah, laakiin wuxu qabaa, waxa uu si toos ah u furo file a AVI sifeeyay. Haatan aan aragno sida loo sameeyo oo Sixira dhici:
1. Ku rakib K-lite codec Pack iyo update FFDShow
Marka hore, la xaqiijiyo in bartilmaameedku yahay file playable in Windows Media Player. Sidaas aad u baahan tahay si loo soo dajiyo ee codecs loo baahan yahay si aad u computer. K-lite codec Pack oo had iyo jeer waxay bixisaa codecs dambeeyay oo dhamaystiran waa wanaagsanyahay. Waxaad kartaa dooro version habboon iyo doortaan codecs aad u baahan tahay.
Markaas furo faylka diirada video la Windows Media Player oo ciyaaro waa. Haddii aan, waa in aad cusboonaysiiso FFDShow in nooca ugu dambeeya.
2. Ku rakib AVISynth
Markaas dejisan iyo rakibi AVISynth , iyo sax dhammaan fursadaha lagu jiro rakibo.
3. Samee Script AVISynth ah
Open buugayga. Nooca DirectShowSource ("c: \_ locationto \_ video.mp4") . Markaas bedeli c: \_ locationto \_ video.mp4 leh goobta si aad file video (midig guji file video ay ku helaan goobta). Markaa waa inaad aadaa "File"> "Save sida"> "Save sida Nooca: Dhamaan files" iyo magacaabo file video sida video.avs . Waxaad hadda dajiyaan karaa file video.avs ee Virtualdub.
Video tutorial: Samee qoraal AVISynth ah
Habka 2: plugins Download u qaabab kala duwan
Plugins sidoo kale xamili karaan loading qaabab files kala duwan. Waxaad kala soo bixi kartaa plugin aad u baahan tahay, iyo waxa ay ka soo fagid galay VirtualDub plugin gal. Laakiin xusuusnow in plugins kuwa u ogolaadaan oo kaliya in aad ku shuban qaabab file gaar ah. Waxaad isma badbaadin karo files kuwa MP4, MOV, FLV iyo qaabab kale, laakiin AVI. Halkan laba plugins ayaa lagula talinayaa in:
# 1. Ffmpeg Input Driver : plugin wuxuu ku salaysan yahay, sida magaca soo jeedin kartaa, ka mid ah maktabadaha ffmpeg ah. Waxay qaban karaa 31 qaabab file kala duwan, iyaga ka mid ah waa MP4 caanka ah, MKV, FLV, MOV, dhexena, RVMB, wmv iyo TS.
# 2. fccHandler : Waxay qaban karaan MPEG-2, FLV, wmv, MKV, FLC iyo sidoo kale AC-3 ACM codec. Si kastaba ha ahaatee, website-ka ay ka maqan yahay waqti xaadirkaan sababo qaar ka mid ah. Laakiin waxaa jira laba muraayadaha la alaabtiisu: Mirror 1 , 2 Mirror .
Si kale ee xaalkaa MP4, MKV, FLV, MOV iyo qaabab kale ee VirtualDub waa u rogo AVI si aad u dajiyaan karaa warbaahinta galay codsiga. Wondershare Video Converter Ultimate waa barnaamij lagu taliyey waxaad isticmaali kartaa hawshan.
• Si fudud loogu badalo MP4, MKV, MOV, FLV iyo qaabab kale oo ay ku AVI.
• U dheellitir video goobaha sida codec, heerka yara, xal sida aad u baahan tahay.
• Habee video by falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
• sida dhaqsaha badan ugu xawaaraha diinta ka tayo waayi maayo.
1. Ku dar video files barnaamijka
Darsada video files gal barnaamijka adigoo gujinaya "Add Files" xitaa buugga deegaanka ama muujinta sahlan jiitaa-iyo-dhibic.
2. Dooro AVI sida qaab wax soo saarka
Markaas riix liiska "Qaabka Output" hoos-hoos u dooro AVI sida qaab wax soo saarka. Waxa kale oo aad u qeexi karaan encoder ku saabsan qalabka-sida "Settings" ikhtiyaarka, sida ku cad image ka.
3. Ku bilow hawlaha qaab beddelidda
Guji "Beddelaan" marka wax walba waa diyaar ka dibna diinta waxaa si otomaatik ah dhamaystiri doono. Waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay adigoo gujinaya "Open Folder".
Hadda sida aad ku furi karo noocyada kala duwan ee video in Virtualdub, kaliya ku sameeyaan isticmaalka software si sameeyaan qaar ka mid ah video tafatir sida aad jeceshahay. Haddii aadan rabin in waqti badan gelinaya qaabab in VirtualDub, waxaad isku dayi kartaa VirtualDubMod , taas oo ay taageertaa qaabab kale oo badan sida MP4 iyo MKV (si kastaba ha ahaatee waxa aan la casriyeeyay by sameeysa tan iyo 2005), ama wax kale oo lagu beddeli karo VirtualDub .
> Resource > Video > Sida loo Edit MP4, MKV, FLV, MOV iyo qaabab kale la VirtualDub